Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Tapitra ny fialantsasatra tsy ara-dalàna any Carbon Nation Cult Leader any Hawaii
Fonja fa tsy fialan-tsasatra any Hawaii izay natrehan'ny mpitondra fivavahana Carbon Nation Eligo Bishop rehefa avy niaiky fa meloka noho ny fanitsakitsahana ny lalàna quarantine tany Hawaii.
Sazy 90 andro no navoaka tamin'ny Alatsinainy, ary naato izany sazy izany satria nifanaiky hiverina tany US Mainland i Bishop sy ny 20 mpanaraka azy.
Hawaii dia mitazona lalàna mifehy ny quarantine hatramin'ny 31 Jolay farafaharatsiny ho an'ireo mpitsidika sy mponina miditra ao amin'ny Fanjakana. Ny fijanonana tsy maintsy atao mandritra ny 14 andro ao amin'ny efitranon'ny hotely dia ny fifaliana atrehin'ireo mpizaha tany rehefa miala sasatra any Hawaii mandritra ny fameperana Coronavirus.
Hawaii News Now dia tao amin'ny seranam-piaramanidin'i Hilo satria tonga tany amin'ny sidina avy tany Hilo ny alatsinainy alina ho any Honolulu i Bishop sy i Dededric Johnson ary i Jacob Benton. Mandeha any Maui izy ireo ary any Los Angeles ihany.
"Tena zava-dehibe amin'i Hawaii izany, noho izany ny fialan-tsasatr'izy ireo teto dia nandany fotoana bebe kokoa tany am-ponja avy eo dia nanao izany tany ivelan'ny fonja," hoy i Roth. Nanaiky ny hampiato ny fiampangana olona 20 hafa voampanga ihany koa ny mpampanoa lalàna, izay mpikambana ao amin'ny fivavahana ihany koa